गीत विवादमा आएपछि कस्तो लाग्यो ?
म एकदम सामान्य मान्छे हो । शान्त रहने चाहने र धेरै मान्छेसँग तर्क/वितर्क, झगडा नगर्ने स्वभावको मान्छे हुँ । म बढी अन्तरमुखी छु । आफ्नोबारेमा गलत तरिकाले प्रचार/प्रसार गरिदिदाँ एकदमै निरिह महसुस हुँदो रैछ । विषय त सामान्य हो जस्तो लाग्छ । खास के हो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुन्छ नि ! मान्छेहरुले यो विषयलाई असम्मानित बनाइरहँदा उदेक लाग्दो रैछ । दुनियाँ कत्रो भ्रममा हुँदो रैछ भन्ने लाग्यो ।
विवाद समाधान भयो, अबचाहिँ कस्तो अनुभुति गरिरहनु भएको छ ?
विवाद तत्कालीन समस्या समाधान मात्र हो । म एउटा झन्झटबाट मुक्त भए भन्ने मात्र हो । विषय त ज्यूँका त्यूँ हुनु पर्छ । बहस हुन जरुरी छ । कानुन निर्माणकालागि सर्जकहरुले पनि व्यवसायिक हिसावले सोच्न र बहस गर्न जरुरी छ । एकखालको मेरो समय बचत भएको छ भन्ने लागेको छ । मानसिक रुपमा म कति विचलित भएको छु यसले मलाई कति समयसम्म असर गर्छ भन्ने कुरा आफैंमा छ । जुन म भोगिरहेको छु । प्रहरीमा जानु पर्ने झन्झटबाट मुक्त भएँ भन्ने लागेको छ ।
यो विवादले आगामी दिनमा तपाँईको साँगितिक यात्रालाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?
ममा आत्मविश्वास थोरै खस्किएको छ । एकदमै स्पिडमा अघि बढिरहेको थिएँ । गलबन्दी आएपछि त व्यस्तता बढेको थियो । गीत/संगीत सम्बन्धि धेरै काम गरिरहेको थिएँ । अन्य क्षेत्रमा पनि हात हाल्ने सोच बनाइरहेको थिएँ । तर अब मलाई रिकभर हुन समय लाग्ने भयो । सांगितिक रुपमा त्यस्तो असर गर्छ भन्ने त लाग्दैन । थोरै प्रभाव त पार्ने नै भयो । आम दर्शक/स्रोतामाझ आउने गरी मैले अर्को काम गर्दा अझै बढी चुनौतीकासाथ गर्नु पर्ने हुन्छ ।
शम्भु राई सत्ता निकट भएकाकारण डराएर सम्झौता गर्नु भयो भन्ने छ नि, हो ?
स्पष्ट के हो भने मुद्धा दायर गर्छु भनेर अन्तिम निर्णयमा पुग्नु भयो । दायर गर्नु पनि भयो । मैले अहिलेकालागि भन्ने हो भने कुनै दबाबबाट होइन । पटक-पटक अदालत जानु पर्ने, प्रहरी चौकी धाउनु पर्ने, मान्छेहरुलाई भेट्नु पर्ने होला, कन्भिन्स हुनु पर्ने होला, प्रमाणहरु पेश गर्नु पर्ने होला, तर्क/वितर्क गर्नु पर्ने होला । यी किसिमका झन्झटबाट मुक्त हुनका लागि मैले यस्तो गरेको हो । त्यस्तो कुनै दबाब महसुस गरेको छैन ।
अलि तनावमा हुनुहुन्थ्या, यसले तपाईंको सिर्जनामा कुनै असर त गर्दैन ?
तपाईसँग कुरा गरिरहँदा अहिलेसम्म दिमागमा केही आएको छैन । पहिला धेरै दिमागमा क्रियटिभ कुराहरु फुर्थे । सिर्जनशिलता हुन्थ्यो । अहिले जाम भएर बसेजस्तो महसुस भएको छ । गीत सुन्न पनि मन लागिरहेको छैन । फ्रेस हुन समय लाग्ला । मेरो स्वभावले होला, एक किसिमले समस्या समाधान भइसक्यो । हाँसी खुशी हिँड्दा पनि हुन्थ्यो । तर मलाई कुनै कुराले छोयो भने लामो समय सम्म छुन्छ ।
समय कसरी बिताइरहनु भएको छ ?
घरमै बसिरहेको छु । म मोडलिङ पनि गर्छु । अहिले तीज गीतको सुटिङको समय हो । १०/१२ वटा सुटिङ क्यान्सिल गरिसकेँ । धेरै जनालाई पेन्डिङमा राखेको छु । पहिला नै सम्झौता गरेको एक/दुई वटा कामहरु जबरजस्ती गरिरहेको छु । भेटघाट गर्न वातावरण सहज बनिराखेको छैन । प्रकाशित : असार १३, २०७६ ११:१२